Dhimasho iyo Dhaawac ka Dhashay Rabshadihii ka Dhacay Magaalada Gaarisa »21/11/2012 :: goofgaduud.com
home > Dhimasho iyo Dhaawac ka Dhashay Rabshadihii ka Dhacay Magaalada Gaarisa »21/11/2012
Dhimasho iyo Dhaawac ka Dhashay Rabshadihii ka Dhacay Magaalada Gaarisa »21/11/2012
Barakacayaal ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolada Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka cabanaya nolol xumo.
Hooyo leh carruur agoon ah, kana mid ah barakacayaasha ku nool Kaamka Barwaaqo ee magaalada Baydhabo ayaa Ishabaydhaba.com u sheegtay in ay wajaheyso xaalad nolol xumo, isla markaana aysan heysan raashin iyo hooy wanaagsan.
Waxa ay sheegtay in hadda ay ku nooshay aqal ka sameysan cooshad.
Dhanka kale NGO Maxali ah oo layirahdo magaciisa Somali Youth Union Development Organization oo ay abaabuleen dhalinyerada magaalada ayaa waxa ay si tabaruc ah Jaabkooda wax ugu qabtaan walaalahooda dhibaataysan.
Dadkaan Nolol Xumada ku haysato Kaamamka Duleedka Magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka codsadeen Walaalaha Muslimiinta in ay lasoo gaaran Kaalmooyin Dhinac walba ah Gaar ahaan Walaalahooda Qurba Joogta ah maadama aan weli shaqo bilaabin Hey’adihii Samafalka.
Magaalada Baydhabo waxaaa ku yaala in kudhow Shan Kaam oo ay ku jiraan barakacayaal kasoo cararay abaarahii kajiray Koonfurta Soomaaliya, kuwasoo aanan helin daryeel iyo gargaar ku filan.